Simsebenzele isiZulu ohlwithe uMngeni - Ilanga News
Home Izindaba Simsebenzele isiZulu ohlwithe uMngeni
Simsebenzele isiZulu ohlwithe uMngeni
uMnu Pappas uthi uzimisele ngokufeza izethembiso azenzile
UMNU Christopher Pappas weDemocratic Alliance (DA), iqembu lakhe ebelifolose ngaye kwesobumeya kuMasipala waseMngeni eligcine
UTHEMBISA ukuqala ngezinto ezilula ezidingwa wumphakathi kakhulu uMnu Christopher Pappas weDemocratic Alliance (DA), iqembu lakhe ebelifolose ngaye kuMasipala waseMngeni, osekuwumlando ukuthi udliwe yilona okhethweni lohulumeni basekhaya obelumhla ka-1 kuLwezi (November).
Sekuwumlando ukuthi leli qembu liwuphuce i-ANC lomasipala, okube ngokokuqala ngqa lihlomula ngomasipala KwaZulu-Natal, selokhu kwabanokhetho lohulumeni basekhaya ngaphansi kukahulumeni wentando yeningi ngo-1996.
UMnu Pappas, ongasitolikelwa isiZulu njengoba esikhuluma sengathi uziphuzela amanzi, uthi sesiside isikhathi umphakathi owa-khele uMasipala waseMngeni unenkinga yodoti ongaqoqwa, imigwaqo engakhanyi, imigwaqo enezigodigodi nokuqinisekisa ukuthi amapaki ayavuselelwa futhi ahlanzekile.
“Ngesikhathi siqhuba umkhankaso wethu, kasizange sibathembise abantu izulu nomhlaba, okuyizinkundla zemidlalo ezibiza u-R14 million nokunye okumba eqolo. Sizimisele ukuqala kancane kancane,” kusho uMnu Pappas.
Uthi ukukhuluma ulimi abantu abaningi kulo masipala abaluqondayo, okuyisiZulu, ngeke akushiye ngaphandle ezintweni ezinyuse umkhankaso wabo. Uthi isiZulu ukhule ngaso njengoba ebehlala emapulazini aseMooi river, aba-ngani bakhe bekhuluma lolu limi, walufunda lapho.
“Ngithe noma sengiyohlala eHowick, ngaqhubeka ngasikhuluma ngoba nakhona bebebaningi abasikhulumayo. Kuthe sengifu-nda eHilton College, ngenza uGra-de 9, ngafunda ukusibhala,” kusho yena.
UMnu Pappas waqeda umatikuletsheni ngo-2009 wayofundela iTown and Regional Planning e-University of Pretoria, okuyilapho uthando lwezepolitiki lwamzuza khona njengoba wajoyina iCongress of the People (Cope) kaMnu Mosiuoa Lekota waze waba yilungu lesigungu sabafundi ngaphansi kwaleli qembu.
Kuthe uma esezizuzile iziqu zakhe, wenza iMaster kwiPublic administration e-University of Walden okuyinyuvesi ya-online, ikomkhulu layo eliseMinneapolis, eMinnesota, e-USA.
Uke waba yikhansela leDA e-Overport, eThekwini lapho athi wafunda lukhulu ngempilo enzima ephilwa ngabantu abamnyama njengoba ebesebenza endaweni enemijondolo kakhulu.
Uzongena kwesokuba yimeya nje, kade eyilungu lesiShayamthe-tho saKwaZulu-Natal emele iDA. Okunye okwehlukile ngaye, wukuthi uzoba yimeya yokuqala ephila impilo yabathandana ngokobulili obufanayo.
Uthembise umshado nensizwa esencane, ahlangana nayo e-University of Pretoria, uMnu Jack Prinsloo. Uthi yize sekunesikhathi bathembisana umshado, kodwa kabafuni ukujaha izinto, bafuna umshado ukuwuhlelela kahle benesikhathi.
Previous articleKugxekwa isihe kubadlali bePirates
Next articleUyabalisa ngokusatshiswa kwendodakazi eyadlwengulwa